मेलम्चीमा अब, कति काम बाँकी ? « प्रशासन
मेलम्चीमा अब, कति काम बाँकी ?
सुरुङ खनिए पनि प्लास्टर र भुइँ ढलान गर्न बाँकी नै छ । अहिलेसम्म ४।५ किमिमा मात्रै प्लास्टर र भुइँ ढलान भएको छ । २३।०८४ किमि सुरुङको प्लास्टर र भुइँ ढलान गर्न कम्तीमा तीन महिना लाग्ने समितिले जनाएको छ ।
सुरुङभित्र कम्तीमा तीनवटा एअर लिफ्ट भेन्टिलेटर पनि राख्नुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा ६० दिन लाग्छ ।
सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्र र सुरुङको मुख जोड्न २५० मिटर पाइप बिछ्याउन बाँकी छ । सिन्धुपाल्चोकस्थित पानीको मुहानमा पनि ६० मिटर लम्बाइको पाइप बिछ्याउन बाँकी छ । सुरुङभित्र छिर्ने अडिटको मर्मत पनि गर्नुपर्नेछ । सबै काम योजनाअनुसार अघि बढे सकिन कम्तीमा साउनको मसान्तसम्म कुर्नुपर्छ । तर, सबै काम सकिएको अर्को ६ महिनापछि मात्रै उपत्यकावासीले पानी पिउन पाउनेछन् ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक देवकोटाले मेलम्ची खानेपानी परियोजना–१ अन्तर्गत सुरुङ खन्ने काम सकिए पनि सम्बन्धित ६।७७ प्रतिशत काम बाँकी नै रहेको बताए । उनले भने, ‘सुरुङ खन्ने काम त सकियो । यसको अर्थ अहिले नै सुरुङभित्र पानी छिराएर उपत्यका ल्याउने होइन । काम अझै बाँकी छन् । ती काम सक्न अगस्ट लाग्छ । त्यसपछि मात्रै सुरुङमा पानी पठाउन मिल्छ ।’
पानी वितरणका लागि उपत्यकाभित्र करिब हजार किमि पाइप बिछ्याउनुपर्नेमा सय मिटर बाँकी नै छ । पानी संकलनका निर्माणाधीन ९ वटा ट्यांकीमध्ये ८ वटाको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । एउटा ट्यांकी त भर्खर निर्माण सुरु गरिएको छ ।
यसबाहेक भक्तपुरको कटुन्जेमा पनि एउटा ट्यांकी निर्माण हुँदै छ । यी सबै काम अगस्टसम्ममा सकिनेछन् ।
अन्य व्यवस्थापकीय काम सकेर आगामी भदौसम्ममा काठमाडौंमा पानी आइपुग्ने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले बताए । तर, उपभोगका लागि भने माघदेखि मेलम्चीको पानी प्रयोगमा ल्याइने उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।